Zvese zvaunoda kuti uzive nezve bhuruu kupisa maharairi | Green Renewables
Munyika yekupisa, kudiwa kwe bhuruu kupisa maharairi, sezvo ichipa kumwe kuvandudzwa uye mikana zvichienzaniswa neyechinyakare emagetsi ma radiator. Uye zvakare, nekuda kwekushambadzira mishandirapamwe yerudzi urwu rweiri rediyeta, zvinofungidzirwa kuti zvinomiririra zvakakosha kuchengetedza mubhajeti yemagetsi.
Chii chinonzi bhuruu kupisa uye ndezvipi zvakanakira nekuipira kushandisa bhuruu kupisa maharairi?
1 Chii chinonzi kupisa kwebhuruu?
2 Bhuruu kupisa maharairi
3 Kutenda nezvebhuruu kupisa radiator
4 Zvakanakira kushandisa bhuruu kupisa radiator
Kutaura panyama, iko kupisa kwebhuruu haipo sezvo iri kupisa kwese. Kupisa kwebhuruu kunonziwo simba rebhuruu kana kupisa kwebhuruu, asi hachisi chinhu chinopfuura kushambadzira mazwi.
Kupisa kwebhuruu kunoenderana neJoule athari, yakawanikwa naJames Prescott Joule muna 1841. Izvi zvinoti kana magetsi achipfuudzwa kuburikidza nekondakita, chikamu chesinetic simba rinotakurwa nemasikironi kana ichipfuura nekondakita, inoshanduka kuita kupisa.
Kubudikidza nekuita uku uye nekuita kune ino panyama mhedzisiro, iyo "yebhuruu" simba mairiiratiyeta anoshanda.
Bhuruu kupisa maharairi
Bhuruu kupisa maharairi anofungidzirwa senyika-ye-iyo-hunyanzvi nekuda kwesimba ravo rakanyanya simba uye ndiwo shanduko yeiyo yakasarudzika emagetsi emagetsi mairi emagetsi. Aya ma radiator anoshandisa resistor kupisa a kupisa kutapira kwemvura inonzi «Blue Sun» uye kuti zvakasiyana nemafuta mune akajairwa ma radiator.
Hunhu hwemabara ebhuruu hwakasiyana neyakajairika. Musiyano mukuru uri mukuumbwa kwayo nemamiriro. Kunze kweiyo radiator kwakagadzirwa nealuminium uye ine digitized yeblue screen. Zvakare, sezvakambotaurwa, chinoyerera chaunopisa uchishandisa chinodzivisa hachisi mafuta akajairika.
Iko mashandiro akafanana neaya eoma kana chitofu chemagetsi, ese ari maviri akavakirwa pa mune iyo Joule mhedzisiro. Kuramba kwakabatana nemagetsi kuri mukutungamira kwekudziisa iyo mvura inonzi Bhuruu Zuva uye izvi, zvakare, zvinopisa casing yekunze, zvichipa kuwedzera kwekushisa mukamuri mune iro radiator.
Kutenda nezvebhuruu kupisa radiator
Kutenda kune ese ekushambadzira macampaign ane chekuita nezvebhuruu kupisa maharairi, inofungidzirwa kuti kushanda kwayo uye kugona kwayo kwakanyanya kure kupfuura kweavo ma radiator. Zvisinei, izvi hazvisizvo. Aya marudzi eiri radiator haasi iwo akaenzana neakaderera kushandiswa kwemagetsi ma radiator. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti mune zvemagetsi mazwi, zvese zvakaenzana nekupisa magetsi emagetsi, kungave mumaovheni, zvitofu, nezvimwe. Inosanganisira kushandiswa kwesimba kwakanyanya. Naizvozvo, kunyangwe iro redhiyeta kupisa redhiyeta riine modhi yakaomesesa, digitized yeblue bhuruu uye inodziya yekudziya kupisa zvakasiyana neiya anowanzoitwa ma radiator, hazvireve kuti zvine mutsindo radiator ine yakaderera magetsi yekushandisa.
Hongu ichokwadi kuti bhuruu kupisa maharairi ane kumwe kugadziridzwa kwetekinoroji kunoitwa mukugadzira kwavo. Improvements senge yeblue screen iyo inotibvumidza isu kumisikidza iyo tembiricha kwatinoda kupisa, isa timer pane, nezvimwe. Dzese idzi sarudzo dzinotibatsira kunatsiridza mashandiro erediyeta uye kwete kutambisa simba zvisina basa. Nekudaro, izvi zvigadzirwa zvehunyanzvi haasi ega kune ebhuruu kupisa maharairi, Naizvozvo, chero hunyanzvi hunowanikwa kumhepo inodzora hunogona kuunza aya magetsi nemasevha ekuchengetedza.
Muchidimbu, tichipa masirogani, kushambadzira uye kushambadza izvo zvinogona kuunzwa ne radiator yekupisa yebhuruu, hachisi chinhu chinopfuura oiri redhiyeta, asi inogadziriswa uye inogadziriswa Icho hachisi chinhu chinopfuura zita uye chitarisiko chakanakisa chekushongedza kukwezva vatengi vakawanda.
Zvakanakira kushandisa bhuruu kupisa radiator
Iko kushandiswa kwerudzi urwu redhiyeta kunopa zvimwe zvakanaka izvo zvinofanirwa kutariswa mukushandisa kwemagetsi kweimba yedu.
Yokutanga ndiko kuchengetedza simba. Kunyangwe iyo isingamiriri kuchengetedza kukuru kana ichienzaniswa neakajairika magetsi emagetsi, ichokwadi kuti, nekushandisa ma probes kudzora tembiricha, ivo vakanyatso nyatso kana uchigadzirisa kupisa kwaunoda kushandisa uye, nekudaro, hushoma huwandu hwekupisa hwakatambiswa. Simba.
Mvura inotenderera mukati mediyeta inonzi Bhuruu Zuva, inokwanisa kuchengetedza kupisa kwakawanda kupfuura oiri yakajairika. Izvi zvinoreva kuti nesimba shoma, rinokwanisa kuburitsa kupisa kwakawanda.
Iyo inogadziriswa uye ine timer. Izvi zvakakosha kune idzo mhuri dzinowira husiku, dzakadzikama dzichiona terevhizheni kana kuverenga bhuku uye usatombo kunetseka nezve radiator. Nenzira iyi, chero mhando yenjodzi yemoto inogona kudzivirirwa uye simba rinopambadzwa.
Mhepo inobuditswa neiri radiator inobuda kuburikidza nechikamu chepamusoro chemidziyo uye inokwanisa kuzvigovera yega mukamuri kuti ichipisa zvakanyanya.
Iyo haina chero mhando yekunhuhwirira kana masara.
Kuisa mitengo yakaderera.
Iyo dhizaini inokwezva uye ine mavara pane zvakajairwa, pamwe nekuve unochinjika kune yekushongedza nharaunda.
Kunyangwe aya ma radiator aine zvimwe zvakanakira uye zvitsva, iwo zvakare ane zvakashata zvichienzaniswa nemamwe ma radiator ekupisa.
Mashandiro ayo akaderera pane ayo mamwe ma radiator senge kupisa pombi. Ipo kuita kweizvi vari 360%, yebhuruu kupisa redhiyeta inongova 100%, sezvo hukama pakati pesimba iri muchimiro chekupisa chinopihwa neiradio uye simba rinodyiwa nemidziyo rakafanana.
Kunyangwe iine zvayakanakira yekushisa tembiricha uye timer, hazvirambike kuti kugadzirwa kwekupisa kuburikidza nesimba remagetsi kwakanyanya kudhura kupfuura mamwe marudzi ekumisikidza.
Sekupedzisa kune irudzi urwu redhiyeta, zvinogona kutaurwa kuti mabhenefiti ayo ephemeral chaizvo achienzaniswa neaya akajairika magetsi rediyeta uye kuti chinhu chega chatinofanira kutarisa patinotenga radiator ndiko kugadzirisa senge mutemo, iyo timer, thermostat , aruminiyamu dhizaini uye kutaridzika, asi gara uchifunga kuti izwi rekuti "kupisa kwebhuruu" riri rekushambadzira chete uye rinoreva kuwedzera kukuru mumutengo wekupedzisira wechigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve bhuruu kupisa maharairi
Chinyorwa chako chave chiri chinonakidza kwandiri asi chakaunza kusahadzika.
Iwe unogona here kunditsanangurira zvaunoreva kana iwe uchiti iyo pombi yekupisa ine kugona kwe360%?
Nzira yekugadzira sei biodiesel